काठमाडौँ। सेकुरिटीवाली हेमा राईको पहिलो म्युजिक भिडियो “मैना रानी” ट्रेन्डीङ्गमा परेको छ।
भिडियो एक दिनमै ट्रेन्डीङ्ग नम्बर ४५ मा परेको छ । यो भन्दा पनि अझै तल आउने क्रममा छ । डेनी लिम्बुको शव्द र जिविहाङ्ग राईको संगीतमा सुनिल छिदालको स्वरमा रहेको छ। हेमा संगै गायक सुनिलले अभिनय गरेका छन् । गायक जिविहाङ्ग राई कै निर्देशनमा भिडियोलाई मनोज राईले खिचेका हुन् । अस्मिता राईको कोरियोग्राफरमा हेमा र सुनिलको अभिनय देख्न पाइन्छ ।
मैना रानी (हेमा राई) र मैना राजा (सुनिल छिदाल) को प्रेम कथा मिलन बिछोड अनि वास्तविक जीवनका तिता मिठा भोगाईहरुलाई समाबेश गरिएको छ । अझ भनौ परिवारको जिम्मेवारी हेमाले लिएको भिडियोमा देखिन्छ । साथै हेमाको वास्तविक जीवनमा केहि हद सम्म मेल खाने भिडियोमा उतारिएको गायक जिविहाङ्ग राईले बताए ।
सेकुरिटी गार्ड हेमाको यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो । उनलाई म्युजिक भिडियोमा ल्याउने चर्चित गायक तथा संगीतकार जिविहाङ्ग राईले हुन् । सुनिल छिदाल पनि सेकुरिटी गार्डबाटै मिठो गीत गाएर चर्चामा आएका हुन् । भिडियो जिविहाङ्ग राई अफिसियलमा सार्बजनिक भएको हो ।
‘कफी विद करण’ का कारण हार्दिक पान्ड्या र केएल राहुल निलम्बनमा, चम्कियो भाग्य यी दुई खेलाडीको !
तपाइँ पनि (PUBG) ‘पबजी’ खेल्नुहुन्छ ? होसियार ! मानसिक सन्तुलन गुम्ला है ?? ‘पबजी’ खेल्ने एक व्यक्तिले आफैलाई मार्न खोजेपछि पुर्याइयो मेन्टल हस्पिटल !!